Ghana iyo Ivory Coast oo Wada Ciyaari Doono Finalka Koobka Qaramada Afrika “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Xulka Ghana ayaa u soo baxay Finalka koobka qaramada afrika,ka dib markii uu 3-0 ug badiyay xulka marti galinayo koobka ee Equatorial Guinea.
Xulka Ghana ayaa goolka la hor maray,waxaana daqiiqadii 42-aad ee ciyaarta gool rigoore ahaa u dhaliyay ciyaaryahan Jordan Ayew.
Ciyaaryahan Wakaso Mubarak ayaa dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay xulka Ghana,sidasi ayaana lagu kala nastay.
Ciyaaryahan Andre Ayew ayaa daqiiqadii 75-aad ee ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay xulka Ghana.
Xulka Ghana ayaa habeenka axada ah ciyaarta kama dambeysta ah ee koobka qaramada afrika la ciyaari doono xulka Ivory Coast.
Garsoorihii ciyaarta Eric Castane ayaa joojiyay ciyaarta markii ay mareysay 82-daqiiqo,ka dib markii ay taageerayaasha xulka Equatorial Guinea ay garoonka ku soo tureen caagadihii ay biyaha ka cabeeen,waxana ciyaarta ay hakad ku jirtay mudo 35-daqiiqo ah.
Diyarad Helicopter ayaa garoonka dul heehaabeysay si ay ula socoto xaaladaha ka taagnaa garoonka Stadio de Malabo ,waxana booliska ka hor taga rabshadaha ay isku dayayeen in ay kala ceriyaan taagerayaasha rabshadaha waday.
Xulalka Ghana iyo Ivory Coast ayaa sanadkii 1992-kii ku kulmay Finalka koobka qaramada afrika.
Xulalka DR Congo iyo Equatorial Guinea ayaa u tartami doono kaalinta sedaxaad ee koobka qaramada afrika.